Weerar culus iyo dilal mar kale ka dhacay magaalada Muqdisho (Warbixin) - Caasimada Online
Home Warar Weerar culus iyo dilal mar kale ka dhacay magaalada Muqdisho (Warbixin)
Weerar culus iyo dilal mar kale ka dhacay magaalada Muqdisho (Warbixin)
Muqdisho (Caasimada Online) – War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in Caawa weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan dowlada oo ku sugnaa nawaaxiga carwo Iidka oo ku dhaw isgoyska Baar-ubax.
Weerarkan ayaa lagu qaaday ciidamada Xasilinta oo halkaa kawaday baaritaano, waxaana lasoo sheegayaa in lagu weeraray dhowr Bam gacmeedyo.
Weerarka ayaa la sheegay inay geysteen maleeshiyaad dhinacyada kasoo maray ciidamada, kuwaa oo Qaraxyada Bamka kadib rasaas ooda uga qaaday ciidamada. Weerarka oo gaadmo ahaa ayaa waxaa ku dhaawacmay askari.
Hay’adaha amaanka Dowlada Somalia ayaan weli ka hadal heerka uu gaarsiisan yahay Khasaaraha ka dhashay weerarka, inkastoo lasoo warinaayo inuu kooban yahay khasaraha.
Dhanka kale Maqribkii ka dib ayaa degmada Waaberi waxaa lagu dilay ah qof rayid waxaana goobta ka baxsaday kooxihii dilka geystay.
Amniga magaalada oo mas’uuliyaddiisa lagu wareejiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa liita, tan iyo markii gobolka Banaadir lagu wareejiyay amniga caasimadda waxaa la dilay dad badan oo rayid ah mana jirto ilaa iyo hadda tallaabo uu qaaday gobolka oo looga hortagayo dilalka qorsheysan ee ka dhacaya magaalada.